Madaxwyne Shariif oo la kulmay Diblomaasiyiin Maraykan ah.DAAWO SAWIRO. | WHEELIYE.COM
Madaxwyne Shariif oo la kulmay Diblomaasiyiin Maraykan ah.DAAWO SAWIRO.
Madaxweynaha Dowladda KMG ee Soomaaliya Sh Shariif Sh Axmed ayaa maanta la kulamay diblomaasiyiin ka socota safaaradda Maraykanka ee dalka Kenya.
Wafdi ka socda safaarada Maraykanka ee magaalada ee magaalada Nairobi ayaa manta kulan la qaatay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya waxayna ka wada hadleen arrimo quseeya xaaladda dalka Soomaaliya iyo doorka marayklanka eek u aadan Soomaaliya, ayagoo sheegay in dowladda maraykaku ay diyaar u tahay in ay taagerto xukuumadda Soomaaliya.
Sidoo kale wafdiga ka socda safaaradda Maraykanka ayaa sheegay in dowladda maraykanku ay taageero xagga banii’aadamnimada ah siin doonto dadka Soomaaliyeed eek u sugan gudaha dalka, halka madaxweynhu uu sheegay in loo baahanyahay in la garab istaago shacabka Soomaaliyeed ee xaalada adag ku jira waqtigaan.
Safiirka Soomaaliya u fadhiya dalka Kenya Maxamed Cali Ameerika ayaa Radio Muqdisho u sheegay in ergada maraykanku ay tilmaameen in ay taageero siin doonaan dadka qaxootiga Soomaalida ah ee ku sugan gudaha dalka Kenya. //”>
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa manta gelinka dambe la kulmi doona wasiirka arrimaha dibadda ee dalka Talyaaniga, sidoo kale wuxuu madaxweynuhu la kulmi doonaa qaar ka tirsan madaxda safaaradaha ee beesha caalamka ee ku yaala Magaalada Nairobi kuwaasoo ay ka wada hadli doonaan xaaladda dalku marayo iyo xoojinta xiriirka diplomasiyadeed ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo wadamadaas.
Madaxweyanaha jamhuuriyada Soomaaliya iyo wafdi uu hogaaminayo ayaa ku sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya, waxayna kulamo kala duwan la yeesheen madax ka tirsan Dowladda Kenya iyo madax kale oo caalamka ka socday, ayagoo u ballansan kulamo kale. //”>
Filed under: Madaxwyne Shariif oo la kulmay Diblomaasiyiin Maraykan ah.DAAWO SAWIRO. |
« Madaxweyne Shariif oo la kulmay wasiirka arrimha Dibadda Talyaaniga.DAAWO SAWIRADA Faahfaahin ku saabsan kulankii Madaxweyne Shariif iyo wasiiru dowlaha Britain ee Africa (Sawirro) »